(Last Updated On: 16/09/2020)
It ma ay goori goor tahay in la qorsheeyo lagu baxsado ee March, ka hor Easter rush. Iyada oo carruurta isagoo fasax, hadda waa waqtigii loo heli lahaa fursadda lagu booqdo jasiiradaha yar ee quusi ​​kara qof aad jeceshahay, koraan dul weyn ugu horeysay quudhin qoyska ee sannadka, Naftaada quusin in qaar ka mid ah magaalooyinka ugu caansan dunida sixir ama dhigtaan mid ka mid ah ciidaha badan oo Yurub bishii March. Waxaa jira meelo badan oo fiican in Europe Si Booqo March.
Sida ay iyagu yidhaahdaan, ‘a bad day in London is still better than a good day anywhere else’ so of course, London lahaa in ay liiska meelaha Great in Europe Si Booqo ee March our.
March waa bisha u weyn in booqo Kensington Palace Gardens, Kew Gardens ama mid ka mid ah Beero top kale London ee, sida badaha ee crocuses iyo daffodils Bloom guud ahaan caasimadda.
The 2019 Coffee Week UK waddaa ka 30-31 March 2019. Quruumuhu waxay u sareeya baristas iyo connoisseurs kafeega isugu yimaadaan on Brick Lane si ay ugu dabaal kafeega. Waxaa jiri doona in ka badan 250 kafeega farsamada iyo Gormeega xero cuntada, tastings iyo bannaanbaxyo, seminaaro interactive, cuntada wadada, cocktails coffee-ku saleysan, music live, DJ, bandhigyo farshaxan iyo si ka badan.
qamri cusub Sample, ka qayb tours warshad khamri iyo qasaan wax la cider kale, biirka, ale iyo lager taageerayaasha Bi'ir Week London. TBC
Haddii aad weli ma tahay in ka badan qabow Winter ah, ka dibna Zermatt in Switzerland waa sharad wanaagsan in la helo barafka. One of the most famous jiga ee Europe, budada ah sida caadiga ah waa fiican ilaa dhamaadka April.
Sida inta badan Zermatt ee ski aagga been kor ku xusan 2000 mitir, waxaa jira yaraanta lahayn oo baraf ah marka ay timaado baxaan skiing. barafka waxaa laga yaabaa in aan tooska ahayn ee magaalada. Si kastaba ha ahaatee, up the mountain, waxaad ka heli doontaa wax ka duwan. baraf Fresh, kuwan raadkaygay Sucuudiga, oo barwaaqadii oo xiiso leh waa sugayeen in la helay. Si ay u dareemaan awood buuxda barafka cusub, halka weli sii joogi ammaan ah, kiraystaan ​​guide ski qaar ka mid ah skiing off-piste a.
Haddii aad soo booqatay beeraha ee London si ay u arkaan ubaxa, sababta ma sii arrimuhu? Tareen si ay Holland! Holland ee ubaxyada Tulip sanadlaha waa arrin soo jiidata kumanaan kun oo dadka safarka ah sannad kasta. Oo sababtaas daraaddeed wanaagsan! March waa waqti fiican in ay soo booqdaan sida aad u noqon doonaa hubi inaad ka maqnaan dadkii badnaa. Tani waxay ka dhigan tahay in tulips ee isu laga yaabaa in aanay u muuqday weli. Waxaad weli ku raaxaysan karaan show ah oo cajiib ah ee caddaanka baraf, daffodils, iyo casaan qurux badan iyo dhagax yakintos buluug. Arintaan ah ku qumman margin u dhexeeya March iyo April. Dabcan, xaaladaha cimilada kala duwan by sano, sidaas darteed waxaa ugu wanaagsan in la tasho website Tulip quduuska qaranka waayo, updates ubax todobaadle ah, kaas oo bilaaban March.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/great-places-europe-march/ - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)